Ukusikwa eludongeni eHolland kubonisa iminyaka engama-30 yegrafiti | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Igraffiti imkile ekubeni bubugcisa obuphantsi komhlaba ukuya yiya kwiigalari zobugcisa ngenxa yamagcisa afana neBanksy bavumeleni zisa olu hlobo lokubonisa ukusuka ezindongeni nasezindongeni ukuya kwezo corridor esihlala sityelelwa ngamawaka abantu kwiindawo ezahlukeneyo zomhlaba.
Ubugcisa obusisigxina ngokwabo, akunjalo xa umntu ethatha enye yeendonga zeGraffiti Hall of Fame, okanye ebizwa ngokuba yi 'Doornroosje' kwisixeko saseNijmegen eNetherlands, kwaye Sika isiqwenga ukubonisa ukuba i-graffiti idlule njani kwiminyaka engama-30 emva komnye. Ifoto enomdla kakhulu kwesona sizathu sokubonisa ukusikwa kwexesha ngokungathi yingxolo yomthi ebonisa ubudala.
Umsebenzisi we-Imgur ogama linguPauldeGraaf ulayishe imifanekiso ethile ye- Uhlalutyo oluneenkcukacha lwecandelo alithathileyo kwiGraffiti Hall of Fame, okanye ebizwa ngokuba yi 'Doornroosje', evela kwisixeko saseNijmegen eNetherlands. Oko kwaqala njengendawo yenkcubeko yokuhamba kwehippie, yaba liziko lomculo kunye nobugcisa kwii-80s zakuqala.
UPaulDeGraaf uphawula ukuba yenye yeendawo zokuqala apho ukusetyenziswa kwe-cannabis kwaba semthethweni kwaye, ukuza kuthi ga namhlanje, sisistudiyo somculo kunye nendawo yokufumana iindondo ezahlukeneyo. Yonke into indawo ijikelezwe ziindonga ezibonisa imibono eyahlukeneyo yintoni graffiti, ukuba ke ngaxa lithile udlule eHolland kwaye uyaluthanda olu hlobo lobugcisa basezidolophini, ngekhe kube yinto embi ukuba ulutyelele.
Iifoto ezithathwe ngulo msebenzisi zibonisa indawo kunye ukusikwa kweminyaka engama-30 yegrafiti eyahlukeneyo evela kumagcisa ahlukeneyo abadlule kwizitalato zayo ukuveza izimvo zabo kunye neenkxalabo ngobugcisa obuthe bathatha indawo yabo, nangona abanye befuna 'ukuyenza' kwimyuziyam yobugcisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Iminyaka engama-30 yamabali egrafiti esikiweyo esenziwe eludongeni